Sida kor loogu qaado awooda maskaxdaada | XidigAcademy
Cilmi baaris ayaa soo bandhigtay in awooda maskaxda ee qofka ay saameyn weyn ku yeelato xaalada agagaarka uu ku noolyahay sida guriga iyo dadka la xiriira. Hadaba halkaan waxaan ku soo bandhigeynaa afar arimood oo kor u qaadi karta awooda maskaxdaada.
1. Iftiinka iyo dhawaqa – Labadaan waxay qeyb weyn ka qaataan kobcinta awooda maskaxda. Qayladu maskaxda way daalisaa balse dhawaqa macaan sida dhageysiga quraanka waxa uu kor u qaadi karaa awooda maskaxdaada. Sidaa si la mdi ah iftiinku waa nolosha. Iftiinka dabiiciga ah ee qoraxda ayaa muhiim ah in uu qofku helo. Waxaad sameysaa in aad dibada u baxdo oo xitaa waqti aad qoraxda fariisato.
2. La xiriir deegaanka – Deegaanka dabiiciga ah sida dhirta iyo biyaha ayaa la sheegay in ay caafimaadka maskaxda qeyb weyn ku leeyihiin. Hadaba waxaad sameysaa in aad u baxdo deegaanka oo aad waqti ku qaadato halkaa. In aad dabaal aado ama aad baadiyaha booqasho ku tagto waxaa ku jira caafimaadka maskaxdaada.
3. Hawo nadiif ah qaado – Qodobkaan waxa uu xiriir dhow la leeyahay kan hore aan u soo sheegnay, hawada magaalooyinka waxaa ka buuxa wasaq oo nadiif ma ahan. Waa in aad isku daydaa in aad hesho hawo nadiif ah. Xitaa gurigaaga dhexdiisa waxaad sameyn kartaa in aad hawada nadiif ka dhigto adiga oo boorka ka saaraya ama isticmaalaya aaladaha hawada nadiifiya.
4. Noqo mid sooshaal ah – Qofka guriga isaga xiran ee aan dadka kale xiriirka la sameyn waxa uu ku dhowyahay in uu waasho. Waxaa cilmi baaris badan lagu soo bandhigay in xiriirka dadka lala yeesho uu caafimaad yahay. Xiriirka gurigaaga iyo kan dibada waa muhiim.